सत्तारुढ माओवादी केन्द्र निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको गठबन्धनमा सामेल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा सहित ८ जनालाई भित्र्याएर मन्त्री मण्डल विस्तार गरेका छन्।
प्रम देउवाको यो कदमसँगै के अनुमान लगाइँदैछ भने माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई विना विभागीय हैसियतमा झारेर राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदैछ, ताकि अपमान महसुस गरेर उनीहरुले राजिनामा गरुन्।
साँच्चिकै त्यस्तै कदम प्रम देउवाले चाले भने माओवादी केन्द्रको प्रतिक्रिया के होला ? अनुमान गरिएजस्तै के माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजिनामा देलान् ? यी प्रश्नको जवाफ हामीले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उर्जा मन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीसँग खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
मन्त्री मण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवाले तपाईंहरुलाई जानकारी दिनु भएको थियो ?
विस्तार भएकै दिन हो क्यार, मन्त्री मण्डलको बैठक बसेको थियो। तर देउवाले त्यसबारे हामीलाई केही जानकारी दिनु भएन।
तपार्इंहरुलाई विना विभागीय बनाएर राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई तपाईंहरुको जिम्मेवारी दिने चर्चा छ। त्यसो गरियो भने तपार्इंहरुको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?
माओवादी केन्द्र भनेको पाएको जिम्मेवारी पुरा गरेर मात्र छाड्ने पार्टी हो। अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी चुनाव गराउने हो। चुनाव सकिएपछिमात्र हामी सरकार छाड्छौं।
विना विभागीय बनाइँदापनि राजिनामा दिनुहुन्न?
मैले भनिहालेँ, विभागीय होस् वा विना विभागीय, अहिलेका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भनेकै निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो। अर्थात्, सबैको दायित्व एउटै हो। चुनावी सरकारले अरु बेलाजस्तो निर्णय गर्नपनि पाउँदैन। अर्थात् सबैको दायित्व भनेको चुनाव गराउने हो।
फेरि कार्तिक ५ गते मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने कार्यक्रम छ। सबैजसो मन्त्री निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न जान्छन्। यस हिसावलेपनि सबै मन्त्रीको समान दायित्व छ यतिबेला। त्यसैले, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्मानित हुने, नपाउने अपमानित हुने प्रश्नै छैन।
मन्त्रालय खोसिँदा पनि सरकारमा बसिरहनु राम्रो हो र?
किन हामीलाई विना विभागीय बनाउने, त्यो बनाउनेले सोच्ने कुरा हो। हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यति हुँदाहुँदै विभागहीन बनाइन्छ भने, त्यसलाई कसरी लिने– यो जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो।
यस सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने, सरकारलाई आधार बनाएर निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रको तानावाना बुन्न लागिएको हो भने, माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले त्यो षडयन्त्र सफल हुन दिने छैनन्।
प्रकाशित ३१ आश्विन २0७४ , मङ्गलबार | 2017-10-17 10:22:14